» म फस्ट बेन्चको छेउको विद्यार्थी हुँ, मलाई चिट चोर्ने र दोस्रो हुने छुट छैन् : वडाध्यक्ष सिग्देल
२१ मंसिर २०७७, आईतवार १०:३९
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मुटुको रुपमा ४ नं वडालाई मानिन्छ । जनसंख्या, बजार, शैक्षिक केन्द्र लगायतका विविध कुराको आधारमा बृहत वडाको रुपमा ४ नं वडालाई चिनिन्छ ।
पुर्वाधारको हिसाबले अन्य वडाको तुलनामा अगाडि रहेको यस वडाको वर्तमान अवस्था, भैरहेका कामहरु, थप योजना लगायतका विषयहरुमा नवयुग डटकमका संवाददाता रुपेश थापासँग वडाध्यक्ष नवीन सिग्देलले गरेको कुराकानी ।
१. हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नं ४ को वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?
– हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं ४ को वर्तमान अवस्था कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका कारण यो क्षेत्रमा निकै नै ठूलो प्रभाव पारेको छ । कोरोना भाइरस महामारीको अवधिमा यस क्षेत्रमा विकास निर्माणको कार्य भने चाहिँ निरन्तर भैरहेको छ । यो क्षेत्रमा (कोभिड–१९) महामारीमा अपनाउन पर्ने मापदण्डहरु अपनाई विकास निर्माणको कार्यदेखि लिएर विद्यालयहरु समेत सञ्चालन गरिएको छ । यस क्षेत्रको वडा कार्यालयबाट वडाबासीहरुलाई दिनु पर्ने सेवा सुविधाहरु निरन्तर सक्रिय भएर दिइएको छ ।
२. ४ नं वडाभित्र अहिले के के काम भैरहेको छन् ?
– यस वडाभित्र कोरोना महामारीको अवधिमा विकासका लागि ४ वटा आयाम तयार पारिएको छ । जसअनुसार यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बजार क्षेत्र बनाउने र व्यवस्थित बसोबासको केन्द्र बनाउने एउटा आयाम हो । दास्रो आयाम यो वडा भनेको एउटा शैक्षिक केन्द्र हो । यस क्षेत्रमा हेटौँडा क्याम्पस, ऐतिहासिक भुटनदेवि मा.वि., उत्कृष्ट विद्यालय आधुनिक मा.वि., श्रमिक मा.वि., निजी क्याम्पस र विद्यालयहरु रहेका छन् । यी विद्यालयहरुमा लगभग १२,००० भन्दा बढि विद्यार्थीहरु अध्यायन गर्दछन् । यस क्षेत्रको विद्यालयहरुमा पठनपाठनका लागि विभिन्न संकाय बढाउने तयारीमा छ । यस क्षेत्रको विद्यालयहरुमा आवश्यक भौतिक निर्माणका कुुराहरुको निर्माण गर्न वडा कार्यालयबाट योजना तयार पारिएको छ ।
शैक्षिक अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरुलाई महामारीको जोखिम मुक्त बनाउन विभिन्न योजना निर्माण गरेको छ । र साथसाथै विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई कसरी व्यवसायीक शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा दिने चुनाती पनि छ । वडाको बिकास समृद्धि वा हाम्रो सिङ्गो समाजको विकासको क्षेत्र शिक्षा एउटा महत्वपुर्ण अङ्ग भएकाले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर दोस्रो काम गरिराखेका छौँ । तेस्रो आयाम भनेको यस वडा एउटा खेलकुदको केन्द्र भएकाले खेलकुदका लागि हुप्रचौर र कर्रामा कवर्ड हलहरु निर्माण भै रहेको छ । यस क्षेत्रमा रहेको धार्मिक स्थल पशुपति मन्दिर, गुम्बा, चिल्ड्रेन पार्क ,इत्यादि लगायत खेलकुद सम्बन्धित कार्यमा दिगो हिसाबले तयार पार्ने गरि निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ । ऐतिहासिक धार्मिक स्थल लगायत खेलकुद सम्बन्धित कार्यहरु आकर्षण बनाई पर्यटकहरुको विकास गराउने तयारीमा रहेको छ । यस क्षेत्रलाई मुख्य गरि व्यवस्थित बजार र बसोबास केन्द्र बनाउनुमा धेरै लगानि गरेको छ ।
यस क्षेत्रमा बढि जनसङ्ख्या र बजार केन्द्रित भएकाले यस क्षेत्रको मुख्य लक्ष्य भनेको गाडि सडकबाट ,मानिस पेटिबाट हिँड्ने, ढलहरु व्यवस्थित, आकर्षक बाटोघाटो ,र ट्राफिक पनि व्यवस्थित बनाउने योजना हो ।
३.कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को अवधिमा वडावासीकको लागि वडा कार्यालयबाट के कस्तो काम भयो ?
– कोरोना भाइरस महामारीको अवधिमा वडा कार्यालयबाट जनताका लागि यो महामारीबाट सचेत रहने, टोलटोलमा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरु परिचालन गरेर जनतालाई सेवा सुविधा दिने, सञ्चार माध्यमबाट जानकारी दिने, सङ्क्रमित भैसकेको व्यक्तिलाई होम आइसोलेसनमा बस्न पे्ररित गरेको छौँ ।सङ्क्रमित व्यक्ति होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नु हुन्न भने उसलाई राज्यले सार्वजनिक आइसोलेसन बनाएको छ त्यसमा व्यवस्थापन गर्ने योजना वनाएको र त्यस मात्र नभएर सङ्क्रमित व्यक्तिलाई यहाँ उपचार नभएको क्रममा भरतपुर,काठमान्डौँ पु¥याइ उपचार गरिएको छ । यो क्षेत्रबाट बाहिर गएका मानिसलाई व्यवस्था र बाहिरबाट आएका मानिसलाई व्यवस्था पुर्वक चेकजाँच गरी सुरक्षा गरिए्को छ । लकडाउनको समयमा खाद्य संकटमा परेका लगभग १ हजार परिवारलाई खाद्य वितरण गरी सम्पुर्ण समस्याहरुको समाधान गरेको छ ।
४.यहाँ निर्वाचित भएर आएपछि वडामा भएका राम्रा कामहरुलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?
– म यस वडामा निर्वाचित भएर आएको साढे तीन बर्ष भैसकेको छ । यस अवधिमा करिब १६ किलोमिटर बाटो ढलान , २४ किलोमिटर ढल, ३० किलोमिटर खानेपानस्को पाइप , १२/१३ किलो मिटर पेटि बनाउने, शैक्षिक केन्द्रमा आवश्यक संरचना/सामाग्रीहरु बनाउने/दिने योजनालाई कार्यान्वयन गरिएको छ । यो भन्दा अगाडिको अवस्था कस्तो थियो र अहिलेको अवस्था कस्तो छ जनताहरुले नै मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुनेछ ।
यो वडामा बालबालिका, महिला, दलित, अपाङ्ग जस्ता बेरोजगारी जनतालाई सीप तालिमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । यो वडामा १५ बर्ष जनप्रतिनिधि बिहिन भएर आएको नेत्रित्व र १५ बर्ष कर्मचारिले जे जस्तो अवस्थामा चलाउनु भयो तर त्यतिबेला पनि जन प्रतिनिधीको अभावले रोकथाम भएका सेवा, सुविधा दिने काममा हामीले पुर्ण रुपमा सघाउ पुर्‍याएका छौं । यो वडाको बिसौँ ठाँउमा विकास निर्माणको काम हरु भैरहेको छ । महामारीका कारण तालिम जनसहभागिता मुलक कामहरु भेला भएर गर्न सकिरहेको छैन । यो क्षेत्रमा स्वास्थ्य केन्द्र थिएन । वडा कार्यालय भाडामा थियो अहिले स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना भैसकेको छ र वडा कार्यालय सारी आफ्नै भवनमा ल्याएको छ ।
५. कार्यकालको बाँकी अवधिमा के कस्तो काम गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
– कार्यकालको बाकिँ अवधि हेटौँडाको गौरवमय योजना कर्रा करिडोरको योजना सम्पन्न गर्ने हो । कर्रा करिडोर योजना सञ्चालन गर्न केहि समस्याका बावजुत प्रयास गरिरहेका छौं । केहि दिन भित्र नै क्र्रा कडियरको काम सुरु हुन्छ । उपमहानगरपालिकाको गौरवमय योजना भनेको सिटि भ्युटावर बनाउने हो । सिटि भ्युटावर यहि वासुदेव सभागृह भनिएको छ । सभागृह प्राविधिक रुपमा बेठीक भैसकेपछि यसलाई नष्ट गरि यहाँ अनडरग्राउन्डसहित सुविधा सम्पन्न सात तले भवन बनाउने प्रयासमा चाहिँ डि.पि.आर अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ ।
यसका साथै भुटनदेवि स्कुल रोडको बाटो साइडको जग्गा त्यसमा घरेलु उत्पादन तथा उपजको विक्री कक्ष निर्माण गर्ने चरणमा छौं । यस्ता गौरवका योजनाहरु पनि अगाडि बढाउने योजनामा छौँ ।
६. यहाँ समक्ष यस वडाका नागरिकहरुको कस्तो गुनासो आइरहेको छ ?
– यस वडामा नागरिकको गुनासो खासै छैन । नागरिकहरुले विकास निर्माणका कामहरु कम भए गुनासो राख्ने हो । वडा बाट सेवा सुविधा कम दिए गुनासो हुने हो । यस क्षेत्रमा सबै किसिमका विकास निर्माणको कामहरु निरन्तर भैरहेको छ । कतिपय कार्यालयहरुमा गुनासो पेटिका राख्छन् तर म गुनासो पेटिका होइन सन्तुष्टि पेटिका राख्छु । यस वडाको कुरा गर्दा, मैले भन्ने गरेको छु , नेपालको राजधानी काठमाडौं, काठमाडौंको राजधानी हेटौंडा, हेटौंडाको राजधानी ४ नं वडा । किन ४ नं होे भने, जहाँ मान्छे धेरै छ त्यहाँ नै राजधानी हो । जहाँ बजार धेरै छ, त्यहाँ नै राजधानी ।
मकवानपुरमा १०२ वटा वडा छ । १०२ वडालाई एउटा कक्षा कोठा मान्ने हो भने, म चाहिँ पहिलो बेन्चको छेउको विद्यार्थी हो । मसँग चिट चोर्ने छुट पनि छैन्, काममा दोस्रो हुने छुट पनि छैन् । यो वडा उत्कृष्ट छ–छैन्, अरुले मूल्याङकन गर्ने कुरा हो । म चाहिँ त्यो स्पिडमा काम गरिरहेको छु ।
७. अन्त्यमा वडावासी नागरिकलाई के भन्नु चाहनुहुन्छ ?
– वडावासीलाई पहिलो कुरो यहाँहरुले हामीलाई अमुल्य मत दिएर निर्वाचित गराउनुभयो । जनप्रतिनिधि बनाउनुभयो । यस अवधिमा यहाँहरुको सबै काममा निरन्तर सहयोग छ । तर, कतिपय ठाउँमा हाम्रो ध्यान नपुगिरहेको हुन सक्छ । अझै पनि हामी मसिनोसँग ध्यान त दिइरहेका छौं । त्यस्तो कतै छ भने, हामीलाई जानकारी गराइदिनुपर्यो, सुझाव दिनुपर्यो । सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।